शरीरकाे प्रतिरक्षा बढाउन चाहनुहुन्छ? नियमित खानुस् यी खानेकुरा - Health TV Online
शरीरकाे प्रतिरक्षा बढाउन चाहनुहुन्छ? नियमित खानुस् यी खानेकुरा
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने मानिसलाई सामान्यदेखि गम्भीर रोगले समाउन सक्छ। त्यसैले प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाउने १० खानेकुरा–
गर्मीयाममा यसरी बच्नुस् लामखुट्टे, झिँगा र साङ्लाबाट